Template loogu talagalay xigashooyinka naqshadeynta garaafka | Abuurista khadka tooska ah
In kasta oo aysan sahlaneyn, maxaa yeelay dadka oo dhami ma aha kuwa diirada saaraya qaybta naqshadeynta sawirada, marka xigta waxaan ka hadli doonaa tillaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad ugu sameysid shax Excel qaab miisaaniyadeed, kaas oo gabi ahaanba wax laga beddeli karo si uun adoo beddelaya kaliya xogta qaarkood, waxaad u isticmaali kartaa nooc kasta oo nashaad ah
Sidoo kale, ayaa sheegay template wuxuu leeyahay qaab miisaaniyadeed halkaasoo lagu muujiyo adeegyada ugu muhiimsan ee ay bixiso, sidoo kale waad u adeegsan kartaa si aad u fahamto inta saxda ah ee naqshadeeye sawir qaade ah, ama inaad miisaaniyadda kala duwan ku hagaajiso adeegyada / alaabadaada.
1 Waa imisa kharashka Naqshadeeye Sawir qaade iyo qaab noocee ah ayaa looga qaadaa adeegyadaada?
2 Shuruudaha qiimaynta iyo tusaalooyinka miisaaniyadda
2.1 Tayada xirfadeed
2.2 Taariikh shaqo iyo khibrad
2.3 Helitaanka iyo waqtiyada la keenayo
2.4 Hababka biilasha iyo goobaha lacag bixinta
Waa imisa kharashka Naqshadeeye Sawir qaade iyo qaab noocee ah ayaa looga qaadaa adeegyadaada?
Guud ahaan, marka la xisaabinayo miisaaniyadda waxay noqoneysaa wax yar oo caajis ah, badanaa waa mid ka mid ah sababaha soo socda:
Kama war qabtid baahiyaha macmiilka.
Khibrad la’aan dhanka waaxda ah.
Tartan qarash badan suuqa dhexdiisa.
Wax cayiman oo gaar ah iyo / ama adeeg cusub / shey.
Markii laga hadlayo intee in le'eg ayey naqshadeeyayaasha Sawiradu ka qaadaan, Barnaamijiyeyaasha websaydhka iyo xirfadle kasta oo kale oo u heellan bixinta adeegyo halka ay hal abuurka iyo tayada farshaxanku ku lug leeyihiin ama kuwa farsamada aad u fiican, u fidinta macmiilka qorshe miisaaniyadeed oo adag mararka qaarkood way yara dhib badnaan karaan.
Shuruudaha qiimaynta iyo tusaalooyinka miisaaniyadda
Iyadoo aan loo eegin haddii xirfaddaadu u jeeddo hawl gaar ah ama haddii aad diirada saareyso koorsooyinka tababarka barashada, qiimaha dhammaan noocyada shaqada way kala duwan tahay iyadoo loo eegayo doorsoomayaal fara badan. Si kastaba ha noqotee, waxaa ugu wanaagsan in la tixgeliyo kuwa aan hoosta kuugu sheegi doono:
In kasta oo ay run tahay inay jiraan sifooyin kala duwan oo ah waa suurtagal in wax la barto oo la horumariyo kolba waqtiga ka dambeeyaRuntu waxay tahay inay sidoo kale jiraan shuruudo ay lagama maarmaan tahay in la awoodo in la cabbiro, iyadoo lagu jiro mid ama qayb kale. Sida ku dhacda qaybta Naqshadeynta Sawirka, halkaas oo qaar ka mid ah tayada lagama maarmaanka ah ay badanaa yihiin:
Hal-abuurnimo: Waa lagama maarmaan in si buuxda loola jaanqaadi karo isbeddelada joogtada ah ee qaybta.
Naxariis: Waxaa loo baahan yahay in la turjumo waxa ay yihiin dhadhanka iyo baahiyaha macmiil kasta.
Kala duwanaansho: Waxaa loo baahan yahay in la fahmo falsafadaha kala duwan ee ganacsiga.
Haysashada astaamahan xirfad kasta, waxay u noqotaa inay lagama maarmaan tahay in qiime weyn la siiyo shaqadaada.
Taariikh shaqo iyo khibrad
Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo khibrada aad u leedahay waxqabadka aad ku takhasustay, maadaama laga soo bilaabay waxaad bixin kartaa natiijooyin aad u fiican, marka lagu daro inaad awoodo inaad ku darto kharashyo badan shaxankaaga miisaaniyadaha Naqshadeynta Naqshadeynta.
Tusaale ahaan, naqshadeeye in ka yar saddex sano oo waayo-aragnimo ah qaybta, ayaa wali loo tixgelin doonaa sidii inuu ku jiray "dhismaha faylalkaaga", Taas oo keenta in dhowr ka mid ah shaqooyinka ay qabtaan ay leeyihiin qiimo jaban, maadaama inta lagu jiro marxaladdan waxa ugu muhiimsan ay tahay hel tixraacyo wanaagsan.
Helitaanka iyo waqtiyada la keenayo
Haddii khibradaada awgeed aad leedahay suurtogalnimada in lagu bixiyo natiijooyin wanaagsan muddo gaaban Ama haddii aad si fudud u kala hormarinayso macaamiisha qaarkood oo ka tagaya hawlo kale, waa inaad ogaataa inay tani tahay wax ay tahay inaad sidoo kale tixgeliso markaad samaynayso iyo markaad gudbinayso miisaaniyadda.
Hababka biilasha iyo goobaha lacag bixinta
Caadi ahaan, goorma shaqo fog ama khadka tooska ah, Naqshadayaashu waxay u muuqdaan inay weydiistaan ​​ugu yaraan 50% kharashka ugu dambeeya kahor waana taas iyadoo loo eegayo waqtiga iyo kalsoonida aad ku qabtid macmiil gaar ah, kuwani badanaa waa xaaladaha miisaaniyadda iyo bixinta in la go'aamiyo, maadaama cayrsashada macaamiisha kadib si loo dalbado qaansheegta ma aha wax lagu farxo.
Waxaan rajeyneynaa inaan awoodnay inaan kaa caawinno arrintan si fudud oo aad u adag isla mar ahaantaana
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Naqshadeynta naqshadeynta naqshadeynta